Kala-Bixiye 2.81 ayaa hadda la heli karaa waana kuwan wararkiisa ugu caansan | Laga soo bilaabo Linux
Kala-Bixiyaha 2.81 ayaa hadda la heli karaa waana kuwan wararkeedu ugu caansan yahay
Ya nooca cusub ee software-ka lagu daydo ee 3D ayaa la daabacay isha furan "Qase Bixi 2.81". Qaabkan cusub waxaa ku jira dhowr isbeddel oo dad badani u arkaan inay wanaagsan yihiin loogu talagalay barnaamijka. Maaddaama horumariyayaashu ay ka shaqeynayeen in ka badan afar bilood qaababka iyo hagaajinta laga hirgeliyey Blender.
Noocaan cusub wuxuu ka kooban yahay in ka badan boqol horumarWaxaa ka mid ah ku darista qalab cusub, burush, hagaajinta matoorada, isbeddelada qaar ka mid ah is-beddelka, iyo waxyaabo kale.
1 Wararka ugu muhiimsan ee Blender 2.81
2 Sidee loo rakibaa Blender 2.81 Linux?
Wararka ugu muhiimsan ee Blender 2.81
Isbedelada ugu caansan, waxaan ogaan karnaa in interface cusub la soo jeediyay si loogu maro nidaamka faylka, oo lagu hirgaliyay qaab daaqad pop-up ah oo sita suuf caadi ah oo loogu talagalay maareeyayaasha faylka. Hababka bandhigyada kala duwan (liiska, thumbnails), miirayaasha, guddi si firfircoon loo soo bandhigay oo leh ikhtiyaarro, faylalka qashinka la tirtiray, goobaha wax laga beddelay ee bakhaarka lagu taageeray.
Isbeddelada kale ee muuqda ayaa ku jira naqshadeynta qalabka wax lagu sawiro, tilmaamuhu wuxuu la jaan qaadayaa joomatari caadi ah. Barnaamijka softiweerku wuxuu soo bandhigayaa geesaha uu burushku saameeyay. Burushyo cusub ayaa lagu daray: burushka «Pose» ayaa kuu oggolaanaya inaad abuurto cillad ku timaadda tusaalaha si waafaqsan xoojinta. Burushka «Elastic Deform» ayaa kuu oggolaanaya inaad qalloociso tusaalaha adigoo ilaalinaya mugga.
Sidoo kale, gudaha Kala-Bixiye 2.81 wuxuu hirgeliyaa shaqada magac-u-beddelka kooxaha xubno ka kooban qaab kooxeed. Haddii markii hore ay suurtagal ahayd in la beddelo oo keliya curiyaha firfircoon (F2), hadda qalliinkaan sidoo kale waa loo samayn karaa dhammaan walxaha la xushay (Ctrl F2).
Marka magaca la beddelo, waxay taageertaa astaamaha sida beddelka regex, qeexidda horgalaha iyo wejiga maaskarada, ka saarista astaamaha, iyo beddelka kan sare iyo kan hoose.
Eevee waxay hadda taageertaa muujinta muuqaalka iyo giraangiraha hooska. Masaafada ugu dambeysa ee falaaraha qorraxda hada si toos ah ayaa loo xisaabiyaa. Qiyaasta ayaa ka dhakhso badan in lagu xisaabiyo GPU-yada casriga ah. Khariidaynta bump waxay bixisaa natiijo sax ah, oo markaa ku soo dhowaata natiijooyinka laga heli karo Wareegyada.
Wax-ku-kordhinta qalabka dhismaha ee loo yaqaan 'Poly Build' kaas oo ka dhigaya is-beddelka iyo abuurista geesoolayaal aad u fudud
Ray raadinta taageerada ku saleysan tiknoolajiyada NVIDIA RTX ee Wareegyada
Waa suurtagal in la sii eegto marinnada kala duwan ee dhiibidda Wareegyada
Shaatiyada ay isticmaaleen Eevee iyo Cycles si aad ah ayaa loo hagaajiyay
Xakamaynta buuqa adoo adeegsanaya sawirka furan ee Intel
Soojiidiyaha wanaagsan: hadda waxaad dooran kartaa waxyaabo badan daaqadda kala sareynta waxaadna isticmaali kartaa furayaasha Shift ama Ctrl si aad wax uga beddesho xulashadaada
Baadhe fayl cusub oo leh dhawr nooc oo aragtiyo ah: aragtida liistada iyo aragtida sawirka thumbnail iyo aaladda dhinaca dhinac ee xulashooyinka. Sidoo kale, wadahadalku hadda wuu madax bannaan yahay wuxuuna ku dhow yahay daaqadaha xulashada faylka caadiga ah
Burushyo cusub ayaa lagu daray aaladda "Grease qalin". Waxqabadka iyo tayada waxqabadka ayaa la hagaajiyay.
Haddii aad rabto inaad waxbadan ka ogaato faahfaahinta daah-furkan, waad la tashan kartaa Xiriirka soo socda.
Sidee loo rakibaa Blender 2.81 Linux?
Ugu dambeyntiina, kuwa xiiseynaya inay awoodaan inay soo rogaan noocyadan cusub ee softiweerka, waa inay ogaadaan taas horumariyayaashu waxay bixiyaan hab rakibid fudud, taas oo ah iyada oo loo marayo xirmooyinka Snap. Marka si aad ugu rakibto nidaamkaaga, waxaad si fudud ugu baahan tahay inaad haysato taageero dheeraad ah.
Rakibaadda waa la qaban doonaa furitaanka terminaalka oo ku qoraya amarka soo socda:
Oo diyaar. Haddii aad horey u haysatay nooc hore oo sidan lagu rakibay, waxaa lagu cusbooneysiin doonaa nooca cusub.
Hada kuwa isticmaala Arch Linux, Manjaro, Arco Linux ama wixii kale oo qaybinta ku saleysan Arch. Noocan cusub waxaad si toos ah uga rakibi kartaa bakhaarrada Arch.
Si fudud terminaalka waa inay ku qoraan amarka soo socda:
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Aplicaciones » Kala-Bixiyaha 2.81 ayaa hadda la heli karaa waana kuwan wararkeedu ugu caansan yahay
Nofeembar 2019: Wanaagga, xumaanta iyo xiisaha Software-ka Bilaashka ah
Internetka Dadka: Laga soo bilaabo Internetka Waxyaabaha illaa Internet-ka Dhammaan